Thermoplastic Road Yekumaka Paint
Yakananga fomula, yekubatana kwakanaka nemugwagwa, pre-mucherechedzo nekambani yedu yakazvitsaurira yekutanga (kunyanya yekongiri base) inosimbisa kubatana.
2. Kurwisa kutsvedza
Pendi yedu ine zvinhu zvinopesana nekutsvedza. Pamamiriro ekuyerera kwakanaka, iyo inorwisa-kutsvedza zvinhu inogona kuve nechokwadi chekurwisa-kutsvedza uye kuwedzera kuchengetedzeka kwetraffic.
3. Kufungidzira kushanda
Zvichienderana neyakagadziriswa mwero wegirazi mabhesi, sarudza zvakanaka kugadzikana kwekumusoro uye yepamusoro yemhando yekumhara yerudzi girazi mabheji ane akasiyana masheche ratio. Vavhenganise zvakaenzana mukati mependi uye ugadzire yakasanganiswa mhando girazi mabheji kana uchiita ichave nechokwadi chekutsva uye chekare kumaka nguva dzose kuve mukuratidzira kwepamusoro.
Shandisa fomula yakasiyana kuburitsa pendi zvinoenderana nekupisa, hunyoro uye mamiriro emigwagwa kana uchiita, simbisa nekumhanyisa nekumhanyisa kumhanyisa uye antifouling chivakwa chekumaka.
Sarudza yakanakisa mwenje uye kupisa kugadzikana mbishi chiyero, wedzera ultraviolet-proof zvinowedzerwa panguva imwe chete, kuve nechokwadi chekureba-kuita ruvara uye kubwinya kunyangwe pazasi kwezuva rakasimba.
6. Anti-kubvarura bvudzi
Bvudzi-kutsemura kwekumaka idambudziko rehunyanzvi mumigwagwa yekumaka zvinhu indasitiri yekumba nekunze. Mushure mekutsvagurudza kwenguva yakareba uye nenzira yekuwedzera yakanyanya tembiricha yekudzivirira lipid zvinhu uye zvinoshanda zvekuzadza, kambani yedu yakagadzirisa zvachose dambudziko rekubvambura bvudzi panguva yekuuraya.
1.Product Zita: Japan UV fluorescent squid squid jig
2.Nickname: ichivhuvhuta pombi inouraya pombi hokore
3.Iyi hoko chishandiso chemashiripiti che squid hove uye nenyunje. Izvo zvakare zvakanaka chaizvo kuenda kunoredza mukati megungwa rakadzika uye 4. gadzirira imwe yenguva pfupi squid sehwambo.
Hove huru yehove hove CC kutenderera hove vhiri 8000 yakanakisa hove hove vhiri
1.Fishing Nzira: Gungwa Fishing
Rudzi rweReel: Spinning Reel - Ndiro reel yesarudzo kune vakawanda anglers, vangave vari hove bass pagungwa kana kunongedza tarpon pamhenderekedzo yegungwa. Nzira iyo iwe yaunokanda nayo inodzungunyika reel ndiwe unosimudza simbi bail waya, iyo inoburitsa tambo yeakakanda.
3.Geati Ratio: 4: 8: 1
4.Hand Kudzidzisa: Ruoko rwekutungamira Ruchinjika
Kubata mavhiri makuru SH 8000 10000 12000 hove vhiri hove vhiri kutenderera
1.Fishing Nzira: Fly Fishing Gungwa Kubata Fishing Trolling & Boat Fishing Kukwezva Fishing
3.Ball mabheyaringi: 6 + 1
4.Gear Ratio: 4.6: 1
5.Hand Kudzidzisa: Ruoko Hwenongedzo Chisingachinjike
Ocean Beach Kubata Kwakakwira Kwakakwirira SW Simbi Mvura Yemunyu Carp Fishing Reels Daiwa
1.Fishing Nzira: Fly Fishing Gungwa Kubata Fishing Trolling & Boat Fishing Mvura Yemvura Yakachena Fishing
2.Feature: Inesimba - Ipa inoshamisa yekumisa simba. Iyo ine yakaoma simbi main shaft, yakakwana mesh drive giya. Zvirinani kusarudza 2000 uye 3000 akateedzana akateedzana kana iwe uri muhove yemvura yakachena. Kana iwe uchidzingirira hove hombe kana mhando dzemvura yemunyu, 4000 kana yakakwira ingave iri nani sarudzo
3.Reel Rudzi: Spinning Reel - Ndiro reel yesarudzo kune vakawanda anglers, vangave vari hove bass pagungwa kana kunongedza tarpon padivi pemahombekombe. Nzira iyo iwe yaunokanda nayo inodzungunyika reel ndiwe unosimudza simbi bail waya, iyo inoburitsa tambo yeakakanda.
4.Ball mabheyaringi: 4 + 1BB
5.Geati Ratio: 5.2: 1
Yakachipa hove reel hove kutenderera reel AR yekuredza reels emunyu emvura kutenderera
DW Spinning reel hove yakashandisa hove reels yekutengesa hove vhiri
3.Geati Ratio: 6.7: 1
Wholesale 5.2: 1 AR Kutenderera hove reel hove reels mvura yemunyu izere nesimbi hove reel
1.Fishing Nzira: General Fishing Bait vachikanda
3.Geati Ratio: 5.2 / 1
FBE Kubata hove yemvura yemunyu hoel inotenderera hove tsvimbo reel
3.Geati Ratio: 4.7: 1 / 5.0: 1
123456 Inotevera> >> Peji 1/43